दसैंमा पैसा लिएर आउने बाचा गरेका शेरबहादुर बाकसमा आइपुगे !! हार्दिक श्रद्धाञ्जली – Paluwa Khabar
भाद्र २७, २०७८ आइतबार 20
दसैंमा पैसा लिएर आउने बाचा गरेका शेरबहादुर बाकसमा आइपुगे
काठमाडौं । हातमा काजगपत्र लगायतका डकुमेन्ट लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार बिहान यताउति गर्दै गरेका स्तब्ध दुई अनुहार दुबईबाट आइपुगेको आफन्तको शव लिएर जाने प्रक्रिया पूरा गर्दै थिए । एक महिना अघि दुबईमा मृत्यु भएका बाँकेस्थित कोहोलपुरका ३० वर्षीय शेरबहादुर कटुवालको शव बुझ्न जेठान (नवराज बोगटी) र मामा (वसन्त बोगटी) विमानस्थल आएका रहेछन्।
राति २ बजे दुबईबाट त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको शेरबहादुरको शव बिहान पौन १० बजे गाउँ लिएर जाने तरखरमा रहेका उनीहरु अध्यारो अनुहार लगाएर भन्दै थिए, ‘आज राति १० बजे गाउँ पुगिन्छ होला।’ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सन् २०१९ मा दुबई गएका शेरबहादुरको मृत्यु एक महिनाअघि हृदयघातका कारण भएको रहेछ। उनकी श्रीमती पनि दुबईमा केही वर्षसँगै एउटै कम्पनीमा काम गरेर नेपाल फर्केकी रहेछिन् ।
मृतकका मामा वसन्त भन्छन्, ‘भान्जाकी श्रीमती पनि दुबईमा काम गर्थिन्। उनी दुबईबाट गत चैत अन्तिममा नेपाल आएकी हुन्। उता दुवै श्रीमान श्रीमती एउटै कम्पनीमा काम गर्थे।’ वसन्तका अनुसार हाल मृतक शेरबहादुरकी श्रीमती घरमा बच्चाहरुसँग छिन्। वसन्त भन्छन्, ‘उनले९मृतक शेरबहादुरकी श्रीमती० दुबैजना नेपाल जाउ भनेकी रहेछिन्। श्रीमानले नमानेका हुन्। दशैंमा घर आउँछु तिमी जाउ, घरमा पैसा कमाएर ल्याउनु पर्छ भनेकाले उनी चाहिँ अगाडि आएकी हुन्। भान्जा उतै बसे।’
मृतकका आफन्तसँगै विमानस्थलमा भेटिएका नेपाली मजदुर एकता समाजका अध्यक्ष तेजबहादुर कार्कीले दुखेसो गर्दै भने ‘उहाँ (मृतक शेरबहादुर)को श्रम सकिएको १ वर्ष जति भयो । प्राय म यस्तो केसहरुमा सहयोग गरिराखेको हुन्छु। र, उहाँ मेरो चिनजानको मान्छेहरु पनि हुनु भयो।’ अध्यक्ष कार्कीले मृतक शेरबहादुरको शव विदेशदेखि घरसम्म पुर्याउने काममा सघाउ पुर्याएकाले विमानस्थल गएका रहेछन्। र, उनले मृतक शेरबहादुरको श्रम अवधि कोरोनाका कारण थप गर्न नसकिएकाले उनले पाउनु पर्ने वैधानिक सबै पैसा पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले नेपालीहरुको शव विदेशबाट ल्याउन ढिला हुनुको विशेष कारण नेपाल सरकारको कर्मचारी र जिम्मेवारी दूतावासले गर्ने कानुनी प्रक्रिया ढिलो गरेर भएका बताए। शव छिटो नेपाल झिकाउनुमा सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै कार्कीले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाउनेहरुको अधिकांश समस्या भनेको शव ढिलो आउनु हो। नेपाल सरकारले घटना घटेको जानकारी हुने वित्तिकै आफ्नो कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिहाल्यो भने मर्नेहरुको आफन्तले दुई–चार दिनभित्रै शव बुझ्न सक्छन्। १–२ महिनासम्म कुर्नु पर्ने थिएन।’
कार्कीका अनुसार मृतक शेरबहादुर कटुवालले २०१९ मा श्रम गरेर दुबई गएका रहेछन तर उनको २०२१ मा श्रम सकिएको छ। ढिलै भएपनि शेरबहादुरको शव नेपाल त आइपुग्यो तर अब उनले पाउने रकम के हुन्छ त्यो भने केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ । तर, कार्की मृतकले पाउने वैधानिक सबै रकम दिलाईदिने विश्वास व्यक्त गर्छन्। जुन प्रक्रियाको लागि उनै कार्कीले पहल गरिदिने भएका छन्।
Prevके भयो उमालाई? माइत आइन् अनि यस्तो अवस्थामा भेटियो श,व
Nextअर्जुन पौडेलको चुम्बन गरिस्यो सार्वजनिक,बिमल र अन्जली रोमान्टिक मोडमा (भिडियो)
बर्दियामा ट्राफिक प्रहरिले बढायाे सक्रियता (फाेटाे फिचर )
भर्खरै शक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुस
मलाई केपी ओली र अदालतले एक्लै पारे साथ दिएनन म के गरुम ?– माधव नेपाल
म डुबेर अर्थतन्त्र उकास्छु : अर्थमन्त्री पौडेल